यी कलाकार जसको शुटिङका क्रममा प्रेम त्यसपछि विवाह भयो, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
यी कलाकार जसको शुटिङका क्रममा प्रेम त्यसपछि विवाह भयो
बीबीसी। त्यसो त हामीले फिल्मी पर्दामा कयौं प्रेम कथा देखेका छौं। जहाँ, कलाकारको जोडी वास्तविक नै लाग्छ। तर, यो प्रेम कथा मात्रै हो वास्तविक जीवनमा मेल खाँदैन।
संचारमाध्यमहरुले बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण र अभिनेता रणवीर सिंहबीच चाँडै विवाह हुँदैछ। तर, त्यसभन्दा अगाडि आज हामी तपाइँलाई ती कलाकारको प्रेम कथाका विषयमा जानकारी दिन गइरहेका छौं जसको प्रेम कथा विवाहमा परिणत भएको छ।
विराट र अनुष्का कुनै बलिउड सेटमा होइन बरु, २०१३ मा एउटा टेलिजिभन विज्ञापनको सेटमा पहिलो पटक भेटेका थिए। त्यसपछि दुवैको मित्रता बढ्न थाल्यो।
मानिसहरुले यो जोडीका विषयका के टिप्पणी गरे उनीहरुबीचको वैवाहिक सम्बन्ध धेरै दिन टिक्दैन। एकतर्फ अजय एकदम शान्त स्वभावका र लजालु थिए भने अर्कोतर्फ काजोल एकमद चञ्चल।
चार वर्ष लामो माया प्रेमपछि अजय र काजोलले १९९९ मा विवाह गरे। क्यामरादेखि लजाउने अजयले आफ्नो विवाहमा फोटोग्राफरलाई पनि बोलाएका थिएनन्। र, थोरै मानिसलाई मात्र विवाहमा बोलाएका थिए।
१९६१ मा जंगली फिल्मबाट सायराले आफ्नो फिल्मी करियर सुरु गरेकी थिइन्। योबीचमा सायराको नाम धेरै जनासँग जोडियो। ती नाममध्ये एक थियो राजेन्द्र कुमार।
तर भाग्यमा अरु नै लेखिएको थियो। २० वर्षको फरक भएपछि मानिसहरुले उनीहरुबीचको सम्बन्ध धेरै दिन नटिक्ने अनुमान लगाएका थिए।
दुनिया, बैगार र गोपी जस्ता फिल्ममा सँगै काम गरेका ट्रेजेडी किङ दिलीप कुमार र सायरा बानोलाई उनकी आमा नसीम बानोले भेट गराएकी थिइन्। सानै उमेरदेखि दिलीप कुमारलाई चाहने सायरा बानोले १९६६ मा २२ वर्षको उमेरमा ४४ वर्षीय दिलीप कुमारसँग विवाह गरेकी थिइन्।
उक्त फिल्मको शुटिङका क्रममा सेटमा आगो लाग्यो र नरगिस त्यहाँ फसिन्। तब सुनील दत्त एक सुपरम्यान जसरी आगोमा प्रवेश गरे अनि नरगिसलाई बचाए। त्यसपछि सुनील दत्त र नरगिसबीचको प्रेम कथा सुरु भयो। र, १९५८ मा उनीहरुले विवाह गरे।
बीरु र बसन्तीको जोडीले सबैको मन जितेको र छ र आलोचनाको पनि सामना गरेको छ। धमेन्द्रले जब पहिलो पटक हेमा मालिनीसँग भेट गरे त्यतिबेला उनी विवाहित थिए।
हेमा र धर्मेन्द्रबीचको प्रेमप्रति हेमाकी आमा खुशी थिइनन्। उनले हेमाकालागि जितेन्द्र नै सही व्यक्ति भएको बताइन्। जितेन्द्र र हेमाको विवाह हुने वाला थियो तर, अन्तिममा हेमाका विवाह धमेन्द्रसँग १९८० मा भयो।